अब कक्षा ११ र १२ को फाइनल परीक्षा घाटगाउँमै !
घाटगाउँ खबर सोमबार, असोज २६, २०७७, ११:३३:००
२६ असोज, सुर्खेत । सरस्वती मावि घाटगाउँमा पहिलोपटक कक्षा ११ र १२ को परीक्षा हुने भएको छ । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण झण्डै ७ महिना ठप्प भएको विद्यालयमा पहिलो पटक कक्षा ११ र १२ को परीक्षा हुने भएको हो ।
कोरोना भाइरसले गर्दा विद्यालयको पठनपाठन ठप्प हुदा कक्षा ११ र १२ को फाइनल परीक्षा रोकिएको थियो । अब रोकिएको परीक्षा केन्द्रको निर्देशनअनुसार आ आफ्नै स्कुलमा हुने भएको हो । यससम्बन्धिको निर्देशक राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोठिमी भक्तपुरले दिने गरेको छ ।
उच्च शिक्षा सञ्चालन गरेको सरस्वती माविले पहिलोपटक कक्षा ११ र १२ को परीक्षा गर्न लागेको प्रधानाध्यापक भरतबहादुर रावलले जानकारी दिए । उनका अनुसार कक्षा ११ को परीक्षा कात्तिक १९ गतेदेखि शुरु हुनेछ ।
कक्षा १२ को परीक्षा भने केही समय पछि सुचारु गरिने प्रअ रावलको भनाई छ । परीक्षा हुने पक्का भएपछि विद्यार्थीलाई तयारी गर्न पनि विद्यालयले आग्रह गरेको छ । यसअघि कक्षा ११ र १२ को परीक्षा विद्यापूर, विजौरा लगायत ठाउँमा हुने गरेको थियो ।
यसअघि कोरोनाका कारण रोकिएको माध्यामिक शिक्षा परीक्षा एसईईको नतिजा आन्तरिक मूल्यांकलनबाट सार्वजनिक गरिएको थियो । नेपालको संविधान २०७२ ले कक्षा १२ सम्मलाई माध्यामिक शिक्षामा राखेको छ ।
जसको अधिकार स्थानीय तहलाई छ । कोरोना महामारीका कारण रोकिएको पठनपाठन सञ्चालन गर्न केन्द्र सरकार महिनौदेखि अलमलमा परेका बेला विज्ञहरुकै जोडबलमा स्थानीय सरकारले पठनपाठन थालेका हुन् ।
यही जोडबलमा केन्द्र सरकारले पहिलोपटक कक्षा ११ र १२ को परीक्षाा सञ्चालन गर्ने अधिकार पनि विद्यालयलाई दिएको हो ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज २६, २०७७, ११:३३:००
चौकुनेका युवक रावलको दक्षिण कोरियामा मृत्यु सोमबार, असोज २६, २०७७, ११:३३:००
पन्त र शाहीको हातमा रविन्द्र स्मृती ब्याडमिन्टन प्रथम पुरस्कार सोमबार, असोज २६, २०७७, ११:३३:००
भेरी कर्णालीको दोभान विकास गर्ने कहिले ? सोमबार, असोज २६, २०७७, ११:३३:००
हुम्लामा खाद्यान्न अभाव सोमबार, असोज २६, २०७७, ११:३३:००